Thursday January 09, 2020 - 16:50:39 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Faah faahino dheeraad ah ayaa la halayaa dagaal xooggan oo maanta dagaalyahano katirsan Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka uu Mareykanku soo tababaray ee loo yaqaano Bancruft ama 'DANAB' ku dhexmaray nawaaxiga garoonka Balidoogle ee Sh/hoose.
sawir hore gaari laga gubay ciidamada Danab
Saraakiil katirsan Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegay inay weerarkaas ku dileen kuna dhaawaceen askar dhowr ah, sidoo kalena ku qabsadeen hub, gaadiid iyo agab military.
"Allaah fadligii Mujaahidiintu waxay dagaalkaas kusoo ganiimeysteen saddex booyadood oo uu shidaal ka buuxo, hub iyo saanad ciidan, waxay sidoo kale dagaalkaas ku gubeen gaari uu saarnaa qori Zuug ah, halka sidoo kale uu cadowgu soo gaaray khasaare dhimasho iyo mid dhaawac" sidaas waxaa idaacada Andalus u sheegay sarkaal u hadlay Xarakada Al-Shabaab.
Maleeshiyaatka la weeraray ayaa watay ku dhawaad 10 gaari waxayna zaad u wadeen saldhigga ciidamada Mareykanka ee Balidoogle sida ay SomaliMeMo u xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay.
Booyadaha shidaalka ee loo waday saldhigga Balidoogle ayaa gaarayay ilaa 7 booyadood waxaana la sheegay in qaar kamid ah booyadaha ay si dirqi ah ku baxsadeen balse ay qaarkood waxyeelo soo gaartay.
Intii uu socday weerarka dhabbagalka ah dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig maleeshiyaatka DF ay ku leeyihiin Mukayga Afgooye halkaas oo la filayay in lagasoo diro maleeshiyaad gurmad ah balse inta aysan soo dhaqaaqin ayaa lagu weeraray xeradooda waxaana lagusoo waramayaa inuu soo gaaray khasaare kala duwan.
Weerarkan ayaa ka dhacay nawaaxiga saldhigga ciidamada Mareykanka ee Balidoogle waxaana in maleeshiyaadka calooshood u shaqeystayaasha ee 'Bancruft' lagu weeraro halkaas ay muujineysaa halista weli Mareykanka iyo maleeshiyaatkiisa calooshood u shaqeystayaasha ah kaga imaaneysa Xarakada Al-Shabaab.
2 ka mid ah Odayaashii soo xuldhibaannada Baarlamaanka oo Muqdisho lagu dilay.